Aretina pesta Nandray andraikitra mba tsy hiparitahan’ny aretina ny Governemanta -
AccueilRaharaham-pirenenaAretina pesta Nandray andraikitra mba tsy hiparitahan’ny aretina ny Governemanta
Aretina pesta Nandray andraikitra mba tsy hiparitahan’ny aretina ny Governemanta
02/10/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Na dia anjaran’ny minisiteran’ny Fahasalamana tanteraka aza ny fahasalamam-bahoaka, dia voatery niditra an-tsehatra ny primatiora, mandray ny andraikitra hamehezana izany. Ny faran’ny herinandro teo noho izany, dia nisy ny fivoriana tsy ara-potoana izay notanterahina tetsy amin’ny lapa-panjakana tetsy Mahazoarivo nandinihina sy nakana fepetra entina hifehezana sy hanafoanana ny fitrangan’ny aretina pesta. Nitarika ny fivoriana ny Praiminisitra, lehiben’ny governamanta, Mahafaly Solonandrasana Olivier. Nandray anjara ihany koa ny minisitry ny Fahasalamam-bahoaka Andriamanarivo Mamy Lalatiana, ny minisitry ny Fanatanjahantena, Andriamosarisoa Jean Anicet, ny minisitry ny Rano, ny Angovo ary ny Akoranafo Rasoloelison Lantoniaina, ny solontena maharitry ny UNICEF, Elke Wisch, ny OMS Charlotte Faty Ndiaye, ny PNUD Violet Kakyomya. Misy eto Madagasikara ny valanaretina pesta, ary misy ny antsoina hoe “peste pulmonaire urbaine”. Azo atao tanteraka anefa ny misoroka ny aretina rehefa voatsabo ara-potoana ny olona tratrany, ary tsy maintsy miara-dalana amin’izany ihany koa ny fampiharana ny fepetra hisorohana ny valanaretina pesta. Miompana tanteraka amin’izany ny asa sy ny ezaky ny governemanta. Manana anjara feno amin’izany ezaka izany ihany koa anefa ny isan-tokantrano sy ny isam-batan’olona, ary ny ambaratongam-pahefana rehetra.
Ireto avy ary ireo fepetra izay horaisina maika manoloana ny fisian’io aretina pesta io, Najoro ny “Cellule de veille”, rafitra manara-maso mba hifehezana faran’izay haingana ny valanaretina pesta; Hamafisina ny fizaham-pahasalaman’ireo olona izay mivoaka sy miditra eto Madagasikara, eny amin’ny seranam-piaramanidina; hisy tahaka izany ihany koa eny amin’ny tobin’ny taxi-brousse. Hanao ezaka manokana ny fitondram-panjakana mba ahazoan’ny SAMVA maka ny fako eto amin’ny tanànan’Antananarivo, mba hisian’ny fahadiovana. Tokony hanaja izany fahadiovana izany koa anefa ny isan-tokantrano, ary atao izay tsy hisian’ny fako sy poti-tsakafo misarika ny voalavo. Ankoatra izay, rehefa misy ny trangana valanaretina tahaka izao, dia tsy maintsy atao ny “Déclaration d’urgence” eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena; izany koa dia mba ahazoan’ireo mpiara- miombon’antoka manampy ny fitondram-panjakana eo amin’ny andraikitra sy ny asa izay efa natombony.
Nambaran’ny solontenan’ny OMS fa misy ny fitaovana famandriham-boalavo, izay sady mamono ny voalavo, ary koa ny parasy entiny. Ireo fitaovana ireo dia haparitaka araka izay haingana indrindra.
Lanonana sy fivorivoriana
Raha ny tranga niseho farany teto Antananarivo, dia mpanazatra eo amin’ny lalao “basket-ball” avy any Seychelles no hita fa matin’ny “peste pulmonaire” rehefa natao ny fitiliana. Tapaka noho izany fa “tsy azon’ny besinimaro atrehina ny lalao basket eo amin’ny fiadiana ny tompondakan’ny CCCOI. Etsy andanin’izany dia narahi-maso sy nanaovana fitiliana avokoa ireo mpilalao sy mpanazatra rehetra.
Atsahatra ihany koa ny hetsika famoriam-bahoaka, mba hisorohana ny fihanaky ny valanaretina” hoy ny praiminisitra , mba ahafahana mifehy ny aretina. Tokony ho tony ny vahoaka, ary hanaja ny toromarika rehetra momba ny fisorohana ny valanaretina, sy hanantona ny tobim-pahasalamana raha misy ny tranga. Ny Fitondram-panjakana kosa dia efa amperin’asa, miaraka amin’ireo mpiara-miombon’antoka mba hamongorana ny valanaretina pesta.
Vidim-bary : Nihena 4 000 Ar ny iray kitapo
Tao anatin’ny herinandro monja dia nahitana fihenany be ny vidim-bary eny amin’ny tsenan’Anosibe. Raha ho an’ny vary “importé” na nafarana tokoa mantsy, dia nahitana fihenana 4 000 Ariary isaka ny gony, na isaka ny kitapo ...Tohiny
Raharaha 7 Febroary : 600 tapitrisa Ar ny trosa hitsoahan-dRavalomanana
Basikety – Coupe du Président : Norombahin’ny MBALL sy ny GNBC